China Exhibit & Trade Show ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Ukwenziwa kwepulasitiki nokwenziwa kwepulasitiki kuqhume endaweni yesehlakalo. IPlastiki inikeza isisombululo esingasindi nokho esiqinile esitholakala ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu, nangezindlela zokwakheka. Izinkampani zomcimbi zithanda i-acrylic ngoba ingahambisana nezindikimba eziningi zokuhlobisa futhi ihlala isikhathi eside ngokwanele ukuthi ibukeke kahle ngemuva kwemicimbi eminingana.
Imikhiqizo yeshidi le-DHUA le-thermoplastic lisetshenziswa kakhulu emadokodweni ombukiso nawokuhweba.
Isicelo esikhulu sifaka okulandelayo:
• Khombisa amacala
• Ikhadi lebhizinisi / incwajana / isibambi sezimpawu
• Ama-poster ozimele
• Umhlobiso wodonga
Ama-Acrylic angama-polymers we-methyl methacrylate (PMMA), enezindawo eziningi ezilusizo ekubonisweni emibonisweni yezohwebo noma ekubonisweni kwephuzu lokuthenga. Zicacile, zilula, zilukhuni futhi ziyamelana nomthelela, zingenziwa ngezifiso, kulula ukuzenza futhi zihlanzeke kalula. Amathuba ngama-acrylics ahamba ngaphezu kokuboniswa kombukiso wokuhweba. Ama-Acrylics ayinketho ethandwayo yezinye izinto zokuthengisa ezinjengamamanequins, ukuboniswa kwewindi, ama-racks abekwe odongeni noma amashalofu, ukuboniswa kwamakhompiyutha ajikelezayo nezimpawu.
Ishidi le-acrylic le-Dhua lenza isisekelo esihle sokwakha amadokodo nemibukiso yezokuhweba. Konke kusuka etafuleni kanye nokuphikisana nama-banner nezimpawu zokubonisa kungatholakala kusuka kushidi lethu le-acrylic ukudonsa ukunaka kwamakhasimende.
● Khombisa amacala
● Ikhadi lebhizinisi / incwajana / isibambi
● Ama-poster ozimele
● Ukuhlobisa udonga
Umbala Acrylic AmaSpredishithi